Amanyathelo okhuseleko xa uhlobisa i-aquarium | Ngeentlanzi
Ngexesha le uhombise kwaye ubandakanye izinto iya kuba yinxalenye yendawo yokuhlala i-aquarium kufuneka sisebenzise ukuqonda, kuba ayizizo zonke izinto ezibandakanya oko. Kukho ezahlukileyo izixhobo ezinokuthintela ukusebenza kakuhle kwenkqubo kunye nentlanzi. Okokuqala, kufuneka ugcine ibhalansi kwaye ungagcwalisi i-aquarium ngezinto ezahlukeneyo ezinokucinezela iintlanzi. Njengokuba ingeyiyo yonke into eyenziwayo ukuze abahlali baphile ngaphandle kwengxaki.
Intoni akufuneki sibeke kwi-aquarium yiplastiki. Ezinye zenziwe ngamachiza anyibilikayo emanzini kwaye ukuba songeza ukuba zinokuba nepeyinti yokuhombisa, singabeka engozini iintlanzi zethu kwaye sonakalise ukulingana kwendalo.
Ukuba sikhetha zibandakanya iinkuni zomthiInto yokuqala ekufuneka siyenzile kukuzicoca kakuhle ukuze izinto ezinazo zingahambisi kubemi be-aquarium, kuba akukho nto ibilayo ngaphambili. Kufuneka silumke kakhulu ngohlobo lomboko kuba ezinye zinokubola, zibangele ukungcola enokutshintsha ioksijini, eyimfuneko kwintlanzi nakwizityalo.
Ngokuphathelele izityalo kufuneka zicoceke ngokupheleleyo Ngenxa yoku, ngaphambili besiza kubacoca emanzini afudumeleyo. Ngale ndlela siyakususa naluphi na uhlobo lobumdaka obunokubakho kwisityalo, njenge ibhaktheriya okanye iminenke kunye nezinto eziyityhefu. Ukuba sikhetha izityalo ezingezizo ezokwenziwa, khumbula ukuba kukho izityalo kwimarike enokuthi, ngenxa yokwakheka kwezinto zayo, zibe yingozi kwi-aquarium yethu.
Las amatye yenye yezinto zokuhombisa kwindawo ezinamanzi, kodwa masingaqhutywa bubuhle babo, uninzi lunokuxabiseka ukulujonga njengoko luyingozi kwintlanzi ngenxa yokwakheka kwazo. Izinto ezinconyelwayo kufuneka zibe nemvelaphi ye-basaltic, i-granite, lava kunye ne-stoneware.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Ukuma komhlaba » Amanyathelo okhuseleko xa uhombisa i-aquarium